Ubuzwe be-Antigua neBarbuda - Isikhwama esisodwa se-University of the West Indies (UWI) Fund
Intela ifakiwe. Shipping ibalwa ngesikhathi sokuphuma.
Inketho ye-University of the West Indies Fund (UWI) iyindlela yokuxhasa ngezimali ikolishi lesine le-UWI.
Abafaka izicelo ku-Citizenship ngohlelo Lokutshala imali abakhetha le ndlela kuzodingeka benze imali nge-US $ 150,000 ye-US. umndeni wabantu abayisithupha (6) noma ngaphezulu (ie ubuncane benani labantu kwisicelo ngasinye ngu-6).
Ukuzibandakanya kule nketho kuzonikeza ilungu elilodwa lomndeni unyaka owodwa, ukufundiswa kuphela, e-University of the West Indies.
Inqubo yokufaka isicelo iqonde ngqo futhi amafomu okufaka isicelo angatholwa Kumenzeli Welayisense wendawo, onikezwe ilayisensi yiCitizensity Unit (CIU).
Lapho ufaka isicelo sakho uzocelwa ukuba ukhokhe inkuthalo efanele efanelekile. Ukukhokhwa kwemali eyi-10% kusebenza emindenini yabantu abayisikhombisa (7) noma ngaphezulu. Lapho usuthole incwadi yemvume, uzocelwa ukuba ukhokhe imali esetshenziswayo yokuqokwa kwemali kahulumeni, imali yamaphasiphothi kanye nomnikelo wakho. Izimali zikhokhwa ngqo kuPhiko futhi umnikelo wakho kumele wenziwe esiKhwameni Esikhethekile Sikahulumeni kungakapheli izinsuku ezingama-30.
Uma sesitholile, kuzokhishwa isitifiketi sobhaliso lobuzwe sokuba lowo ofaka isicelo ngokuyinhloko namalungu omndeni wabo azothunyelwa kwiHhovisi Lephasiphothi ukuze abhekane nokufaka isicelo sabo sepasipoti kanye nanoma yimiphi imibhalo ehambisana nayo. Lapho usuqedile, umenzeli / ummeli wakho ogunyaziwe uzokuthumela incwadi yakho yamaPasipoti kanye Nesitifiketi Sobuhlali.
Isandla esiKhwameni seYunivesithi yeWest Indies (UWI) Fund
A. Okomndeni we-6: -
Umnikelo we-US $ 150,000 (kufaka phakathi imali yokufaka)
B. Umndeni we-7 noma ngaphezulu: -